IGreenpeace ibeka iApple kwiqonga leenkampani zobugcisa eziluhlaza | Ndisuka mac
Iinkampani zetekhnoloji kufuneka ziqwalasele ngokukodwa ukukhathalela okusingqongileyo. Ukukukhumbuza le ndima ibalulekileyo, i-NGO yendalo esingqongileyo iGreenpeace ihlala ipapasha rhoqo ngonyaka isikhokelo ukwazi amaxabiso awenzayo ngobuchwephesha obukhulu behlabathi: Google, Amazon, Microsoft okanye Apple. Ngale ndlela, kolu hlobo luka-2017, IGreenpeace ibeke iqela laseCupertino kwidrowa yesikhulumi, ukuyinyusa kwindawo yesibini.
Isikhokelo esinegama lophawu ngophawu luthini uxabiso ngokwecandelo kunye nenqanaba lokugqibela eliphunyelelweyo yinkampani nganye, liqwalasele kolu hlelo ukuba iApple iphucule kakhulu, ngakumbi kwicala iApple ethatha ngalo ukubhenela nasekuziboneleleni ngokwamandla ahlaziyekayo. . Umzekelo uya kuba yi-Apple Park yakho entsha.
Ngoku, ukuba iApple yenza inkqubela phambili malunga noku, kutheni ingayi kwindawo yokuqala kwaye umahluko uphumelele? Okokuqala siza kukuxelela lonto I-Fairphone yinkampani enyukela phezulu kwinqanaba. Kwaye isizathu silula: ezo zeCupertino azifuni ukuququzelela umsebenzisi ukuzilungisa ngokwakhe izixhobo; bakhetha konke oku ukwenzeka ezivenkileni zabo. Ke ngoko, ukulungisa izixhobo kwibhloko akusoloko kulula. Ukongeza, kukho iimeko apho iApple ikhetha ukungalungisi kunye nokutshintsha ikhompyuter enesiphene entsha. Kwaye malunga noku, iFairphone, kunye neemodyuli eziphathwayo, yenza ukulungiswa kube lula kwaye ivumela ukutshintshwa kweendawo ezingalunganga.
Ngakolunye uhlangothi, kuluhlu ziimpawu ezinje ngoDell (indawo yesithathu), kunye ne-HP (Hewlett Packard). Ngelixa iFairphone kunye neApple zifumana inqanaba elipheleleyo le-B kunye ne-B-, ngokwahlukeneyo, uDell kunye ne-HP babetha nje okuvunyiweyo (C +). Zonke ezinye iinkampani (Google, Amazon okanye Microsoft) ziyasilela kwesi sifundo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » IGreenpeace ibeka iApple eqongeni kwiinkampani zobugcisa eziluhlaza